USAANewsstandFinanceBank / Financial institutionUSAA USAA (Source: https://www.facebook.com/USAA) USAA - Lifehouse, Brett Young and so many more - | It wasabeautiful day for baseball and saluting | It may be USAA Navy Appreciation Day, but |.. Latest Articles USAA Photo 2017-06-26 21:00USAALifehouse, Brett Young and so many more - see howapremium access pass at #USAABaseFEST can get you access to some of your favorites. Will you be joining us on Independence Day at Camp Lejeune http://usaa.us/2sKccKNPhotos from USAA's post - USAA 2017-06-26 17:51USAAIt wasabeautiful day for baseball and saluting America's Navy. Thank you San Diego Padres for hosting USAA's Navy Appreciation Day!USAA Video 2017-06-25 22:32USAAIt may be USAA Navy Appreciation Day, but there's always time to recognize #MarineCorpsRecruitDay with the San Diego Padres.USAA Video 2017-06-25 21:12USAA103-year-old Lt. Jim Downing, the second oldest Pearl Harbor survivor, throws out the first pitch at today's USAA @USNavy Appreciation Day with the San Diego PadresUSAA Photo 2017-06-23 13:11USAAIt's #BringYourDogtoWorkDay. Share how your best friend(s) help you through your busy day - http://usaa.us/2rYVecQBase*FEST Premium Pass Giveaway - USAA 2017-06-22 17:49USAA#USAABaseFEST is almost here and we’re excited to be giving away premium access passes toafew lucky winners. To enter, simply like this post! Randomly selected winners get to enjoy private seating, complimentary catered food and much more. Good luck. No purchase necessary. See rules here:...Muni Bond Prices Supported by Heavy DemandUSAAMarket Commentary: Returning investors helping drive demand for municipal bonds - http://usaa.us/2su5ZCPGeorge W. Bush Presidential Center - USAA 2017-06-22 13:39USAAProud to have Harriet Dominique, senior vice president of USAA's corporate responsibility and community affairs, participate asapanelist for this event tomorrow. Be sure to tune in for the live feed beginning at9a.m. EDT. #knowourvets #StandToUSAA Disaster Recovery - USAA 2017-06-21 18:02USAAAs Tropical Storm Cindy moves closer inland, please heed local official’s warnings to help keep you and yours safe. If impacted by the storm, we are here to help with your claim at http://usaa.com/Help, on USAA Mobile App & 1-800-531-8722.7 Tips foraBetter Car Rental ExperienceUSAAPlanningagreat summer adventure on the open road? Here are7tips forabetter car rental experience.5 Ways to Steer Teen Drivers in the Right DirectionUSAASimple ways to help protect teen drivers.Calling All Military and Veteran Music Lovers! | We Are The MightyUSAACalling all military and veteran music lovers. We’re teaming up with We Are The Mighty to find the next big recording artist in the military-veteran community. Will you be entering? Next More Finance Elite Credit SolutionsInternet Financial ServicesMyFinPlanner.comSG SolutionBPIMicrofinance Amatak Capital PlcDoha InsuranceCommercial Bank of QatarFinancial Advisor DallasInsureandGo UK Related Articles Personal Loan - All Your Questions Answered | Bajaj Finserv BlogOne solution for all your financial problems! Seeka#PersonalLoan up to Rs 25 lakh without any hassle and find the easy way out. Read our blog and know everything you need to know about personal loan, interest rates, credit score, eligibility, repayment and all other queries. Explore: http://bit.ly/PL_Queries_27 SBI Life Insurance Photo 2017-06-27 07:25Finding the inner you is an experience in itself. #CelebrateLife Maybank Photo 2017-06-27 05:00All Credit and Charge card payments at point of sale terminals in Malaysia must be authorised witha6-digit Personal Identification Number (PIN) as signature authorisation will no longer be accepted effective 1 July 2017. Please activate and set PIN for your PIN & Pay Credit or Charge Cards now #MaybankCards
Details: http://mybk.co/zyzt Maybank Photo 2017-06-27 01:45Effective 1 July 2017, signature will no longer be accepted for cards payment. Both Credit and Charge card payments at point of sale terminals in Malaysia must be authorised witha6-digit Personal Identification Number (PIN). Please activate and set PIN for your PIN & Pay Credit or Charge Cards now. #MaybankCards
Visit http://mybk.co/zyyv for more info. Bank of America Photo 2017-06-26 17:00Are youamoney managing master—or are you committing one of these all-too-common errors? http://go.bofa.com/4qpab Don't Miss Out! - Capital One 2017-06-26 15:57Hey, Cardholders! The pre-sale for the Foo Fighters Concrete and Gold tour is LIVE. Buy your tickets before they sell out. Ndani TV - GTBank 2017-06-26 15:20#ICYMI Watch the official trailer for our upcoming series, #LagosBigBoy now on www.ndani.tv 😀 KBZ BANK Photo 2017-06-26 09:58နေ့စဉ်ဘ၀မှာ ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိတဲ့ စိတ်အလိုမကျမှုတွေ၊ စိတ်ဖိစီးမှုတွေ၊ မပျော်ရွှင်မှုတွေကို ဖြေဖျောက်ဖို့ရာ မိမိအတွက် မလိုအပ်တဲ့အရာတွေကို စိတ်အလိုလိုက်ပြီးသုံးစွဲမှု (Emotional Spending) တွေပြုတတ်ကြပါတယ်။ ဒါဟာ မိမိရဲ့ငွေကြေးကို အလကားသက်သက်အပိုကုန်စေပါတယ်။ လတ်တလောစိတ်ပြေပျောက်စေပေမယ့် ရေရှည်မှာ ငွေကြေးပြသနာတစ်စုံတစ်ခုနှင့် ထပ်ကြုံတွေ့ရမှာပါ။
ဒီတော့ ယခုအပတ် Money Monday အစီအစဉ်ကနေ ဒီလိုမျိုးစိတ်အလိုလိုက်ပြီးသုံးစွဲမှုတွေကို ဘယ်လိုမျိုးအဆုံးသတ်မလဲ ဆိုတာကိုဆွေးနွေးသွားမှာပါ။
၁။ ဘာကြောင့် စိတ်အလိုလိုက်ပြီး မလိုအပ်တဲ့သုံးစွဲမှုတွေပြုလုပ်မိသလဲဆိုတာကိုသေချာစဉ်းစားပါ။ ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းပါ။ စိတ်အလိုလိုက်ပြီးသုံးစွဲလိုက်ခြင်းဟာ အဖြေမဟုတ်ပါ။
၂။ အပြင်ထွက်တဲ့အခါမျိုးမှာ ငွေအများကြီးယူဆောင်သွားတာမျိုး၊ Credit Card နဲ့ စိတ်လိုလက်ရသုံးစွဲလိုက်တာမျိုးကိုရှောင်ပါ။
၃။ တစ်စုံတစ်ခုကို ၀ယ်ဖို့ ဆိုင်ထဲကိုဝင်သွားတိုင်း "ဒါဟာ ငါ့အတွက်တကယ်ကော လိုအပ်ရဲ့လား ?" ဆိုတဲ့မေးခွန်းကို ကိုယ့်ကိုကိုယ်ပြန်မေးပါ။
၄။ မိသားစုနှင့် သူငယ်ချင်း မိတ်ဆွေများ၏ ဖေးမမှုကို ယူပါ။ (စိတ်ညစ်တဲ့ အခါမျိုးမှာ မိသားနှင့် သူငယ်ချင်းတွေကို ပိုမိုလိုအပ်ခြင်းဟာ စိတ်အလိုလိုက်ပြီးသုံးစွဲတာကိုရပ်တန့်စေပါတယ်။ )
၅။ အခြားသော ပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာ နည်းလမ်းတွေရှာဖွေပါ။
သင့်ရဲ့ မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းတွေထဲမှာ စိတ်အလိုလိုက်ပြီးဝယ်ယူမှုတွေ မကြာခဏပြုလုပ်တတ်တဲ့ သူကို Tag တွဲပြီး အကြံပေးပေးဖို့တိုက်တွန်းလိုပါတယ်။
နစေ့ဉျဘဝမှာ ဖွဈလဖွေ့ဈထရှိတဲ့ စိတျအလိုမကမြှုတှေ၊ စိတျဖိစီးမှုတှေ၊ မပြျောရှငျမှုတှကေို ဖွဖြေောကျဖို့ရာ မိမိအတှကျ မလိုအပျတဲ့အရာတှကေို စိတျအလိုလိုကျပွီးသုံးစှဲမှု (Emotional Spending) တှပွေုတတျကွပါတယျ။ ဒါဟာ မိမိရဲ့ငှကွေေးကို အလကားသကျသကျအပိုကုနျစပေါတယျ။ လတျတလောစိတျပွပြေောကျစပေမေယျ့ ရရှေညျမှာ ငှကွေေးပွသနာတဈစုံတဈခုနှငျ့ ထပျကွုံတှရေ့မှာပါ။
ဒီတော့ ယခုအပတျ Money Monday အစီအစဉျကနေ ဒီလိုမြိုးစိတျအလိုလိုကျပွီးသုံးစှဲမှုတှကေို ဘယျလိုမြိုးအဆုံးသတျမလဲ ဆိုတာကိုဆှေးနှေးသှားမှာပါ။
၁။ ဘာကွောငျ့ စိတျအလိုလိုကျပွီး မလိုအပျတဲ့သုံးစှဲမှုတှပွေုလုပျမိသလဲဆိုတာကိုသခြောစဉျးစားပါ။ ရငျဆိုငျဖွရှေငျးပါ။ စိတျအလိုလိုကျပွီးသုံးစှဲလိုကျခွငျးဟာ အဖွမေဟုတျပါ။
၂။ အပွငျထှကျတဲ့အခါမြိုးမှာ ငှအေမြားကွီးယူဆောငျသှားတာမြိုး၊ Credit Card နဲ့ စိတျလိုလကျရသုံးစှဲလိုကျတာမြိုးကိုရှောငျပါ။
၃။ တဈစုံတဈခုကို ၀ယျဖို့ ဆိုငျထဲကိုဝငျသှားတိုငျး "ဒါဟာ ငါ့အတှကျတကယျကော လိုအပျရဲ့လား ?" ဆိုတဲ့မေးခှနျးကို ကိုယျ့ကိုကိုယျပွနျမေးပါ။
၄။ မိသားစုနှငျ့ သူငယျခငျြး မိတျဆှမြေား၏ ဖေးမမှုကို ယူပါ။ (စိတျညဈတဲ့ အခါမြိုးမှာ မိသားနှငျ့ သူငယျခငျြးတှကေို ပိုမိုလိုအပျခွငျးဟာ စိတျအလိုလိုကျပွီးသုံးစှဲတာကိုရပျတနျ့စပေါတယျ။ )
၅။ အခွားသော ပြျောရှငျဖှယျရာ နညျးလမျးတှရှောဖှပေါ။
သငျ့ရဲ့ မိတျဆှသေူငယျခငျြးတှထေဲမှာ စိတျအလိုလိုကျပွီးဝယျယူမှုတှေ မကွာခဏပွုလုပျတတျတဲ့ သူကို Tag တှဲပွီး အကွံပေးပေးဖို့တိုကျတှနျးလိုပါတယျ။
#MoneyMonday #KBZBank Copyright © 2017 Taable Note. All rights reserved.